Intlanzi yeSwordtail | Ngeentlanzi
Los intlanzi yekrele, ekwabizwa ngokuba yiXipho, Portaespada okanye igama layo lenzululwazi uXiphophorus Helleri, ungowosapho lwentlanzi iPoecillidae kunye nomyalelo weCyprinodontiformes. Ezi ntlanzi zincinci zivela kwimilambo, imilambo kunye namachibi anamanzi amhlophe kakhulu anemisinga ethambileyo, efumaneka ikakhulu kwimilambo ekuMbindi Merika. Ezi ntlanzi zincinci zibonakaliswa ngokuba nomsila owomeleleyo, ngelixa imitha engezantsi yomsila wentlanzi eyinkunzi yanda imilo yekrele, yiyo loo nto befumana eli gama likhethekileyo.
La ukufakwa umbala kwezi zilwanyana, xa bekwindawo yabo yendalo, kuluhlaza, nangona kunjalo xa besekuthinjweni, oko kukuthi emanzini nasemachibini, bathambekele ekuphulukaneni nalo mbala. Ngaphandle koku, xa bekwi-aquarium bafumana imibala eyahlukileyo kakhulu, ukusukela kwimibala ebomvu emzimbeni wabo wonke, kwiiorenji ezinemiphetho emnyama emsila wazo. Ngendlela efanayo unokufumana ii-albino, neon abamnyama phakathi kwabanye.
Kufuneka iqatshelwe ukuba intlanzi eyindoda inokulinganisa ukuya kuthi ga kwiisentimitha eziyi-8 ngaphandle kokubala umsila wayo, ngelixa abantu basetyhini bahlala bekhula kancinci ukuya kuthi ga kwiisentimitha ezili-12. Ezi zilwanyana zine- isimilo sedimorphism, inkunzi inekrele emsileni, ngelixa iimazi zingenalo. Nangona kunjalo, le yokugqibela ithambekele ekubeni inkulu kwaye yomelele ngakumbi kunamadoda.
Ukuba ucinga ukuba nezi ntlanzi kwi-aquarium yakho, kubalulekile ukuba uyikhumbule into yokuba Ubushushu bamanzi e-aquarium Kufanele ukuba ibephakathi kwama-20 nama-28 degrees celcius, ngelixa i-pH kufuneka ibe phakathi kwesi-7 nesi-8,3 Ngendlela efanayo, ezi ntlanzi zincinci zifuna indawo eninzi ukuze zikhule kakuhle, ukongeza kutyani oluninzi kunye neebhotile ezingaphantsi okanye ezimnyama.
Ngoko ukutya kwaboKhumbula ukuba i-swordtails ziyi-omnivorous, ke ukutya kunokuhluka ngakumbi, kugqamisa ukutya okomileyo, kunye nokutya kokutya, okunje ngesipinatshi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi akwariyam akwariyam » I-Aquarium yetropiki » Intlanzi yeSwordtail